5 Best Winter aga Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Winter aga Europe
Europe nwere a ụfọdụ oyi amara n'oge oyi ọnwa na-n'adịghị ka ọ bụla ọnọdụ na ụwa. E nwere ọtụtụ nke dịgasị iche iche, na ọ dịghị abụọ ebe nwere otu mmetụta na ikuku. N'ezie, ọtụtụ ndị na-ekwu na obodo n'oge oyi ọnwa na-eche dị ejegharị ejegharị na-a ọhụrụ ebe. Winter nwere kediegwu ike ịgbanwe Europe kpamkpam, na n'aka nke, ike a kpam kpam ọhụrụ ahụmahụ ndị ọbịa na ha nwere ike ghara inwe mgbe ọ bụla ọzọ oge nke afọ. The na-ada snow na-eweta na ọ ọtụtụ oyi na-eme na mkpa ememe na ihe niile dị nnọọ ememme. N'agbanyeghị ọtụtụ mgbanwe na ịma mma, ọ gaghị ekwe omume gaa ihe niile. Ọ bụrụ na ị chọrọ njem ka ụfọdụ ndị kasị ewu ewu njem tụrụ, ịga ndị a 5 oyi aga Europe.
Okporo ígwè iga bụ ihe kasị environmentally friendly ụzọ njem. Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Zọpụta A Train ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
1. Winter aga Europe: Budapest, Hungary
Ọ bụrụ na ị na-achọ a oyi wonderland ga itu n'anya ị, ahụ anya ọ gara n'ihu karịa Budapest. Ọ bụ zuru okè obodo a oyi getaway. Otu n'ime isi ihe mere na ọtụtụ họrọ Budapest bụ ọnụ udu. Ị na-na-enweta a mara obodo ahụ maka ihe oké ọnụ ọnụego. Budapest na-abụkarị zuru ndị njem n'oge okpomọkụ. Otú ọ dị, n'oge oyi, ị ga-esi na-ahụ obodo mara mma na di ntakiri ìgwè mmadụ. E wezụga na, you get a lot of chimney cakes and tasty wine.
Ihe ọzọ bonus bụ pụtara Margaret Island. Ọ bụ zuru okè n'ebe na nleta ọ bụrụ na ị chọrọ nwere ihe The Epic Snowball agha. A ọtụtụ obodo na-eme njem nleta na-ekpokọta na ndị enyi ha na-enwe snow. Ọ bụrụ na Snowball ịlụ ọgụ na-abụghị nke gị, mgbe na-enwe ike iji atụrụ n'ihu a na nnukwu ụlọ! Budapest City Park-aghọ onye na ice iji atụrụ rink n'oge oyi. Ozugbo ị rụchaa ebre na snow, i nwere ike ịga na na na baths. Ịtụnanya Gellert spa bụ a akwa ebe na-emesapụrụ na-enwe ụfọdụ thermal mmiri.
Venice nwere ike ghara ịbụ ihe mbụ na-abịa n'uche mgbe ị na-eche na European winters. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-aga n'obodo ọwa mmiri n'oge oyi, ị ga-echeta na ọ ruo mgbe ebighị ebi. The jupụtara n'okporo ámá na ụzụ cafes na-toned ala, na ị na-ahụ a anyanwụ nke obodo ahụ n'oge okpomọkụ ike na-egosi. All na na na na naa nke okpomọkụ ọnwa na-anọchi na a nwayọọ na serene ikuku na bụ zuru okè n'ihi na a oyi stroll. Otú ọ dị, ọ dị oké mkpa iburu n'obi na obodo na-abịa ndụ ngwa ngwa mgbe Venice ejị na-apụta gburugburu. Kwa February, obodo na-akawanye a anya nke ọbịa, na ornate masks mmiri n'okporo ámá nke obodo. Creative ekike na dancers n'okporo ámá ka obodo yi akụkọ ihe mere eme ndụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ a na; oyi na ị ga-echefu, tinye Venice gị ndepụta.
3. Winter aga Europe: Paris, France
France ijikota ka ọtụtụ ná ndị na-atọ ụtọ nri na ihunanya n'ọnọdụ dị iche iche. Otú ọ dị, na mba na-aghọ ọbụna ọzọ maa mma mgbe oyi na-apụta gburugburu, karịsịa na isi obodo. Paris bụ pụtara n'agbanyeghị ihe oge nke afọ gị njem e. dị mwute ikwu na, ọ bụghị ọtụtụ ndị mmadụ na-na-enweta ya n'oge colder oge. Paris, obodo nke ịhụnanya na romance, bụ n'aka na-atọ na mmasị gị ma ọ bụrụ na ị na-emetụta yi a na-ekpo ọkụ jaket na ndị ọzọ oyi attire. The festive oge na-eweta Paris ndụ. Ọbịa nwere ike ọ bụghị naanị na-imeju na-atọ ụtọ nri na wine ememme. Otú ọ dị, ọ bụkwa ndị zuru okè oge ịhụ ihe dị ka The Festival Wonderful na Musée des Arts Fairground na Ọkụ Festival na Jardin des Plantes.
Inyocha obodo ahịa na mma n'okporo ámá, mgbe ị na-ewere mma nke obodo. Winter bụ zuru okè oge na-a ije tinyere Seines mmiri ma ọ bụ ga-efu na n'okporo ámá nke Le Marais. Ozugbo ị na-ahụ na, i nwere ike gbapụta n'ime a Paris Cafe na-enwe a ọma ọṅụṅụ. Ozugbo ahụ bụ ime eme, ị pụrụ ịhụ ihe niile isi na-adọrọ mmasị na Paris ole na ole e.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ puku ndị njem na-enuga Austria nile n'afọ, e nwere otu fairytale obi na-adị n'oge oyi. All ndị obodo na mba nwere ihe enchanting obi na-adị na bụ nnọọ pụrụ iche. A na-enwekarị ịrịba snoo na-ada site na November ka March. Nke a pụtara na snow ndị hụrụ na-n'aka-asọpụrụ Austrian winters. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-enweta ọdịdị zuru oke nke ihe Austrian oyi, nleta Vienna. A magburu isi obodo bụ ma ama n'ihi na ya festive mmụọ na e ji mara attire. Ọ bụrụ na ị na-na na na na naa n'ihi na ụfọdụ oyi shopping, eme ka n'aka ileta Christmas ahịa. Vienna nwere ụfọdụ ndị kasị ewu ewu na ahịa na dum nke Europe. Visitors-esi na-enwe na-atọ ụtọ Austrian nri na-aṅụ ụfọdụ mulled mmanya. E wezụga na, e nwere dị iche iche ejiri mee ihe na tọrọ ụtọ chocolate emeso.
5. Winter aga Europe: Interlaken, Switzerland
Ọ bụrụ na ị bụ onye nke edinam na ike were anọkọ na a obodo maka oyi ezumike, mgbe Interlaken na Switzerland bụ oyi ebe maka gị. N'adịghị ka na-ewu ewu, nnukwu obodo ebe, Interlaken bụ a-eme obodo dịdewere Alps. Ọtụtụ puku skiers na snowboarders ka ụzọ ha na-Interlaken ọ bụla na oyi na-eji nke ịrịba odida obodo na ebe ahụ na-enye. Interlaken nwere mma nke ma ụwa. Firstly, mbọhọ na-adaba adaba ohere ịtụnanya ugwu na-eme. Nke abuo, ọ na-enye ihe niile onye pụrụ chọrọ mgbe ọ na-abịa ụlọ ọrụ. Ma ị na-enwe ìhè fun, ma ọ bụ na ị chọrọ iji nwalee gị ókè na oké ụzọ, Interlaken bụ maka gị. Ihe ọ bụla gị echiche nke fun bụ, ị ga-enwe obi ụtọ mara na ị pụrụ ime ka ụzọ gị azụ obodo na-enwe ụfọdụ fondue.
Europe nwere ihe maka onye ọ bụla. Ọ bụ gị na-ekpebi ihe gị oyi wonderland anya dị ka na ojiji Save A Train ka e. E nwere ọtụtụ na ahụmahụ na oyi ọnwa, so get adventurous and take a bold step forward.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Winter aga Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/winter-destinations-europe/ – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
europetravel trainjourney ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ travelaustria travelfrance travelitaly travelswitzerland winterdestination winterdestinations wintertravel